पर्यटनमा सम्भावना खोज्ने कि ? « Phidim Today
पर्यटनमा सम्भावना खोज्ने कि ?
Published on: 12 May, 2019 7:14 am
पाँचथरमा सम्भावना बोकेका धेरै पर्यटकिय स्थलहरु हँुदा हुदै पनि प्रचार प्रचार र एकिकृत पर्यटकिय कार्यक्रम नहुँदा ति स्थलहरु आन्तरकि तथा बाह्य पर्यटकको गन्तब्य बन्न सकिरहेको छैन् । पाँचथरमा सुर्यदय देखिने मिक्लाजुङ डाँडा देखि उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेको तिम्बु पोखरी सम्मका पर्यटकिय स्थलहरु रहेका छन् ।
नजिकै रहेको छिमेमि जिल्लाहरुले पर्यटनमा फड्को मार्दा पाँचथर गुमनाम हुनु यहाँको नेतृत्व र अगुवाहरुमा प्रश्न गर्ने ठाँउ देदिन्छ । संगैको जोडिएका जिल्ला इलाम र ताप्लेजुङले पर्यटनमा फड्को मार्दा हाम्रो जिल्ला पर्यटनमा पछि परेको देखिन्छ । हामिले केहि पहल गर्ने हो भने दुबै जिल्लाबाट केहि केहि पर्यटक भित्राउनमा सकेमा पर्यटनको विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । पर्यटनलाइ पनि उद्योगको रुपमा विकास गरे जिल्लाको आर्थिक पक्षमा सुधार आउने छ ।
पाँचथरको दक्षिणी भेगमा ४ जिल्ला संग सिमाना जोडिएको मिक्लाजुङ डाँडा र रबिमा रहेको जरिबुट्टे डाँडा जँहाबाट इलामको श्रीअन्तु जस्तै सुर्यदय देख्न सकिने स्थानियहरु बताउछन् । धार्मिक पर्यटकहरुको लागी किरातहरुको आस्थाको केन्द्र लब्रेकुट्टि र सिलौटि, सुम्हात्लुङ मन्दीर, बेहुलीढुङ, आगेजुङ गुम्बा, जोरपोखरी जस्ता धार्मिक पर्यटकिय स्थलहरु रहेको छन । साथै सुकेपोखरी, लेकगाँउमा रहेको पोखरी, कमलपोखरी, जोरपोखरी जस्ता प्रकृतीका सुन्दर संरचनाहरु गुमनाम जस्तै रहेको छन । ऐतिहासीक हिलीहाङ दरबार क्षेत्र पनि प्रचारको अभाबमा गुमनाम रहेको छ ।
यि क्षेत्रहरुमा पर्यटनको सम्भावना रहदा रहदै पनि पयटकिय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिएको छैन् । अहिले स्थानिय सरकार बनिसेको बेलामा यि क्षेत्रहरुलाई बिशेष ध्यान दिएर पर्यटकिए क्षेत्रकोरुपमा विकास गर्न सके पाँचथरको आर्थिक विकासमा ठुलो टेवा पुग्ने देदिन्छ ।
वर्षेनि करीब ३ लाख धार्मिक पर्यटकहरु पाँचथर हुदै ताप्लेजुङको पाथीभर सम्म तिर्थयात्राको लागी जाने गरेका छन । तर पाँचथरमा ति पर्यटकहरुको लागी रोक्न सकिने अवस्था नरहदा पाँचथरबाट वर्षेनि ठुलो रकम गुमाउदै आएको छ । पाँचथरमा रहेका यि पर्यटकिय स्थलहरुको प्रचार, संरक्षण, प्रबद्धन गरी आन्तरकि तथा बाह्य पर्यटनको बिकास गरी समृद्ध पाँचथर निर्माण गर्न सबै सरोकारवालाहरु एकिकृत पर्यटन कार्यक्रममा जोड दिन आवश्यक छ ।
प्रचार संगसंगै संरचना निर्माणमा पनि सरोकारवालाहरु सोच्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।